Gabadh Yahay Sidee U Qurxin Kartaa Qeyb Walbo Oo Jirkaaga Kamid Ah Billaa Make-Up La’aan.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Gabadh Yahay Sidee U Qurxin Kartaa Qeyb Walbo Oo Jirkaaga Kamid Ah Billaa Make-Up La’aan..
Published: March 5, 2014, 11:18 pm
Liin dhanaanta (laymuunka):
Casiirka laymuunka wuxuu ka midyahay dawooyinka dabiiciga ah ee lagu daweyn karo dhibaatooyinka maqaarka. Wuxuu qurxiyaa maqaarka wajiga, oo uu ka hortagaa jilciyaana dhibcahaa wajiga ka soo baxa.
Casiirka laymuunka waxaad marisaa wajiga oo kuna daysaa daqiiqado, kadibna iskaga dhaq biyo diirimaad ah. Casiirka laymuunka waxaa kale oo uu ka tirtiri ilkahaaga midabka jaalada ah, saas daraadeed ku cadayo ama ku luqluqo maalin walba.
Liinta macaan (burtuqaalka)
Si aad u heshid gacmo qurux badan oo jilicsan, waxaad marmarisaa gacantaada markaad awoodid diirka burtuqaalka, sababtoo ah wuxuu uyahay maqaarka qado dabiici ah oo siisa qurux.
Waa faakiho ama furuut oo uu ku badanyahay fitaamiin (A), kaas oo muhiim aad ugu ah timaha. Wuxuu timaha udiidaa daadista.
Wuxuu xoojiya ilkaha oo uu qurxiyaa, sababtoo ah waxaa ka buuxa kaalshiyuum iyo fitamiin (A).
Wuxuu faa�iido u leeyahay dadka wajiga finanka ku leh. Tiinku wuxuu wajiga ka yareeyaa dufanka, saas daraadeedna uu bi’iyaa finanka wajiga ku yaala oo uu liishana ka dhigaa.
Baqdoonis ( parsley; persille)
Si aad u heshid waji qurux badan oo iftiimaya ku dhaq wajigaaga baqdoonis subaxdi iyo habeenkii mudo wiig dhan.
Hadaad rabtid in aad wajigaaga ka ilaalisid ama ka baa’bi’isid coodhcoodhka ( rynker ama wrinkle), waxaad shiidaa dhawr xabo oo farawl ah oo kadibna marisaa wajigaaga subaxdi iyo habeenkii, kadib ku dhaq wajiga biyo leh baqdoonis ( parsley ama persille ). Farawlaha wuxuu caawiyaa oo kale nadiifinta wajiga oo uuna liisho ka dhigaa.
Waxaa lagu daweeyaa wajiga si uu uga bi’iyo coodhcoodhka iyo dhibcaha ka soo baxa wajiga. Hadduu wajigu dufan badanyahay, waxaa qajaarka lagu shiidaa caano.
Wuxuu faaido badan uyahay timaha, oo uu jilciyaa dhalaaliyaana. Wuxuuna ka bi’iyaa timaha xuubka. Waxaad marisaa waxyar timaha kahor intaadan qabaysan oo aadan dhaqin timaha. Lugahana waad marinkartaa oo wuu qurxiyaa, wuxuuna ka bi’iyaa xariiqyada buluuga ah ee ka soo baxa xididada lugaha, saas daraadeed waxaad ku duugtaa cagaha subixii iyo habeenkii mudo dhan bil. Hadaad rabtid in aad baruurta iska ridid, mar walba oo aad cunteyneysid koobka ay biyuhu kuugu jiraan ee aad cabeysid, ku shub labbo qaado oo khal ah kadibna cab.
Wuxuu cilaanku dawo uyahay xuubka sidoo kale marsigiisu wuxuu xoojiyaa cidiyaha.
Akhriso Wiil Aad U Da’yar Oo Tallo U Baahan Qiso Cajiib Ah Soo Gaarsiiyay Sheekh Mohamed Idiris…
Tallooyin Aad Iskaga Daweyn Karto Ama Kaga Hortagi Karto Hergabka “Durayga”..